बाह्य हार्ड ड्राइभमा के हो
सामान्य व्यक्तिगत कम्प्युटर जस्तै कसैले, जबकि अरूलाई यो एक कम्प्याक्ट नोटबुक संग वितरित गर्न सम्भव छ कसरी कल्पना गर्न सक्दैन। यस मामला मा, विवाद प्रयोगकर्ता प्राथमिकताहरू सारा कुरा हो, र "को लागि" हरेक तर्क त्यहाँ एक "बुरा" किनभने बेकारी छ। र यो लेख को लेखक: धेरै वर्ष को लागि व्यक्तिगत कम्प्युटर, घडी को कल जस्तै चलाउन गरिन्थ्यो। तपाईं केहि बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने - सीडी सधैं हात छ; अर्को कम्प्युटरमा सूचना गर्न, फ्लैश ड्राइव, मदत गर्नेछ तर तपाईँको डिजिटल फोटोहरू फिर्ता गर्न परिवार एल्बम अर्को हार्ड डिस्क, कम्प्युटर बन्द गर्न आवश्यक गर्न, दोस्रो SATA हार्ड ड्राइभमा जडान र यसलाई फाइलहरू प्रतिलिपि। त्यसपछि फेरि विच्छेद र प्रणाली ब्लक सङ्कलन। सिद्धान्त मा, केही विशेष गरी यस कार्यका रूपमा अक्सर गरेको छैन, यो मा असम्भव छ, तर, म धेरै कार्य गर्न, त्यसैले कहिलेकाहीं विचार छ कि बाह्य धेरै उपयोगी हुनेछ उत्पन्न भएको थियो HDD हार्ड ड्राइभमा युएसबी बस। निश्चय पनि, यस्तो अवस्थामा कसैले आफूलाई चिन्न।
लगभग युएसबी जस्तै - मान्छे भनेर आधुनिक बाह्य SATA हार्ड ड्राइभमा मानक (र बोर्ड) शीघ्र थाह समर्थन तातो स्वाप हट-प्लग। कि त सबै बस लगे जब, यो एक कम्प्युटर तालिकाको एक खण्ड मा स्थित छ, विशेष गरी यदि प्राप्त गर्न एकदम गाह्रो छ जो कम्प्युटर मामला, को रियर प्यानल कनेक्टरों ई-SATA विकासकर्तालाई, सोच थियो के छैन खाली गर्नुपर्छ।
सबै जारी छ, तर एक पटक यो ल्यापटप जगेडा हार्ड ड्राइभ बाट जानकारी प्रतिलिपि गर्न लगे। HDD क्षमता संग तुलना, त्यसैले त्यस्तो उद्देश्यको बाह्य USB हार्ड ड्राइभमा लागि खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो सम्म छडी। प्रगति को इन्जिन - यहाँ पनि, साँच्चै, आलस्य।
शब्द बाह्य हार्ड के अर्थ छ? यो disassembly बिना एक डेस्कटप या नोटबुक कम्प्युटरमा जडान गर्न सक्ने हुन बाह्य कनेक्टरों टायर को माध्यम द्वारा र, यस्तो ड्राइभ छ। वास्तवमा, यो संकुचित र सुविधाजनक फ्लैश ड्राइव को एक प्रत्यक्ष प्रतियोगी छ। त्यहाँ एउटा मात्र छ "तर": फ्लैश स्मृति एक गिगाबाइट को लागत धेरै पटक चुम्बकीय हार्ड डिस्क ड्राइव मा भन्दा उच्च छ। अर्को शब्दमा, 64 जीबी फ्ल्यास कार्ड को मूल्य को लागि पूर्ण HDD 500 भन्दा बढी जीबी को खरिद गर्न सकिन्छ। कुनै टिप्पणी।
प्रस्ट छ, बाह्य हार्ड ड्राइभमा यो विश्वव्यापी छ किनकी, USB बंदरगाहों जोडिएको हुनुपर्छ। साँच्चै, यस्तो मोडेल अवस्थित। "व्हील reinvent" गर्न चाहनुहुन्छ नगर्ने ती लागि सबै भन्दा राम्रो समाधान छ। बस यूएसबी पोर्ट गर्न हार्ड ड्राइभ को केबल जडान, त्यसैले यो प्रणाली चिनाउँछ। तर, केही मोडेल शक्ति को आपूर्ति वृद्धि गर्न दुई बन्दरगाह गर्न साथ जडान मान, बरु, यो एक सुविधा, एक दोष छ। खैर, हामी रूपमा फ्लैश ड्राइव रूपमा महत्वपूर्ण हुनत कुनै बाह्य USB हार्ड ड्राइभमा SATA मानक दर हराउछ भनेर याद गर्नुपर्छ। एकदम संभवतः, USB 3.0 को ठूलो परिचय स्थिति परिवर्तन र गति खाली कम गर्नेछ।
सचेत प्रयोगकर्ता जो तपाईं नै मूल्य डिस्क स्पेस को दुई पटक रकम प्राप्त गर्न सक्छन् प्रयोग गरेर अन्य दुई विकल्प रुचि हुन सक्छ। पहिलो तिमी धेरै साधारण हार्ड ड्राइभमा युएसबी पोर्टमा जडान गर्न सक्छन् जो संग SATA-को USB अनुकूलक को खरीद, समावेश छ। साथै, अनुकूलक सुरक्षित तिनीहरूलाई दोस्रो जीवन ल्याउन बन्द तखता हार्ड ड्राइव वृद्धहरुको प्राप्त गर्न सक्छन् त, पनि पुरानो मानक पाटा समर्थन गर्दछ।
दोस्रो तरिका किन्न छ नोटबुक को लागि एक हार्ड ड्राइभमा युएसबी इन्टरफेस पहुँच उहाँलाई लागि र "खल्ती"। किन ल्यापटप लागि एक मोडेल चाहिन्छ? धेरै सरल! यसलाई मिलान सामना गर्न सक्छन्, र आयाम कम छ - एक पोर्टेबल HDD लागि आवश्यक छ।
सारांश, हामी बाह्य हार्ड रूपमा USB फ्लैश ड्राइव रूपमा आवश्यक छ भनेर भन्न सकिन्छ। को छडी जोडले, तीन पटक छिटो हुनेछ, पाठ्यक्रम, ड्रप र मात्रा बढ्न हुनेछ भन्ने छ।
राष्ट्रिय Bolshevism: को विचारधारा र आधारभूत सिद्धान्त
Potemkin भर्याङ - ओडेसा को एक प्रतीक
Multivarka मा sauerkraut संग सूप कसरी खाना पकाउनु?
मोंटे कासा4* (मोंटेनेग्रो / बुडवान्स्का रिवेरा): पर्यटकहरु द्वारा समीक्षा
गाउँमा Starominskaya: विवरण र इतिहास
दबाइ "Immunal": समीक्षा र पुस्तिका
होटल Avala Resort र विला4* (मोन्टेनेग्रो / Budva रिवेरा): फोटो र समीक्षा